याे कस्ताे न्या’य ? काेराेनाबाट ज्यान गुमाउनेका आफन्तलाई पशुपतिमा कि’रिया घरकाे ढाेका ब’न्द – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारयाे कस्ताे न्या’य ? काेराेनाबाट ज्यान गुमाउनेका आफन्तलाई पशुपतिमा कि’रिया घरकाे ढाेका ब’न्द
याे कस्ताे न्या’य ? काेराेनाबाट ज्यान गुमाउनेका आफन्तलाई पशुपतिमा कि’रिया घरकाे ढाेका ब’न्द
पशुपतिको वि’द्युतीय श’वदाहगृ’हमा को’भिडबाट मृ’त्यु भएकालाई सोमबार बिहानैदेखि जलाइँदै थियो । बाहिर मृ’तकका आफन्तहरूको ची’त्कार उ’त्तिकै सुनिन्थ्यो । आफन्तले मृ’तकको अनुहार पनि हेर्न पाउँदैनन्, दा’गबत्ती दिन त परको कुरा ।
बाहिरबाटै फूलमाला र पी’ताम्बर अर्पिन्छन् । अनि श’व ज’लाउन सेनाको टोलीले विद्युतीय श’वदा’हगृहभित्र लैजान्छ । अब मृ’तकका आफन्तलाई अर्को स’मस्या जन्मन्छ । कि’रिया कहाँ बसेर गर्ने ? घर हुनेले त घरमै गर्छन् । कोठामा बस्ने र बाहिर जिल्लामा घर भएकाले के गर्ने ? वि’द्युतीय श’वदा’हगृहनजिकै छ पशुपति विकास कोषको ‘कि’रियापु’त्री सेवा’ भवन ।
‘कोभिडबाट मृ’त्यु भएकाको परिवारलाई त पशुपतिमा बसेर कि’रिया गर्न दिँदैनन् रे !,’ वि’द्युतीय श’वदाहगृ’हअगाडि मृत’कका आफन्त भन्दै थिए । ती व्यक्तिले थपे, ‘हाम्रो त दक्षिणकाली हो । यहाँ नदिने रहेछ । अब घरमै जाने हो,’ उनको टोली कि’रियाका लागि दक्षिणकाली घरतर्फ लाग्यो ।
पशुपतिको कि’रियापुत्री सेवा भवन । लहरै छन् कोठाहरू । केही कोठामा न’नकोभि’डका कि’रियापुत्री बसेका छन् । केही कोठा खाली नै देखिन्थे । तर, भवनबाहिर भने को’भिडका मृ’तकका आफन्त कि’रिया घरको खोजीमा थिए । एकातिर आफन्त गु’माउनुको पी’डा । अर्कोतिर कि’रिया गर्न कोठा छैन । पी’डामाथि थप पी’डा ।शिला पत्र